लकडाउनमा काठमाडौं उपत्यका भित्र विद्युतकाे तार भूमिगत गर्ने काम जारी | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
लकडाउनमा काठमाडौं उपत्यका भित्र विद्युतकाे तार भूमिगत गर्ने काम जारी
access_time२०७७ साल जेष्ठ १० गते, शनिबार ०६:२६ AM chat_bubble_outline Comments folder_open प्रदेश ३ पत्रपत्रिका
काठमाडौं । लकडाउनमा काठमाडौं उपत्यका भित्र विद्युत्को तार भूमिगत गर्ने काम अगाडि बढेको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन सुरु गरिएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) का बीच पनि विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिने सरकारको नीतिअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्को तार भूमिगत गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको हो ।
राजधानीको महाराजगञ्ज र चावहिल–चुच्चेपाटी क्षेत्रमा अहिले विद्युत्को तारलाई भूमिगत गर्ने कार्य भइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन ५ गते काठमाडौंमा विद्युत्को तारलाई भूमिगत गर्ने कार्यको उद्घाटन गरेका थिए । उनले भने, ‘महाराजगञ्जमा कामलाई निरन्तरता दिन नसकिए पनि चाहबेल–चुच्चेपाटी क्षेत्रमा तारलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई सम्पन्न गरिने छ, यस क्षेत्रमा काम गर्नका लागि काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति प्राप्त भइसको छ, मङ्गलबारबाट काम सुरु हुनेछ ।’
सम्पन्न गरिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार भूमिगत हुने प्रसारण लाइनमा जीपीएस प्रविधि जडान गरिने छ । यो प्रविधि जडान गरेपछि नियन्त्रण कक्षमै बसेर कर्मचारीले कहाँ आगलागी भएको छ ? कहाँ विद्युत् सर्ट भएको छ ? भन्ने जस्ता सूचना प्राप्त गर्नसक्छन् । यसबाट प्रसारण लाइनको अवस्थिति मात्र नभई तार ठीक भए नभएको सूचनासमेत सङ्कलन गर्नेछ ।
विद्युत् प्रसारणको भूमिगत प्रणाली सुरु भए पनि एक वर्षसम्ममा अहिले सञ्चालनमा रहेको प्रणाली (ओभरहेड) कायम हुनेछ । उनले एक वर्ष परीक्षण गरेपछि मात्र ‘ओभरहेड’ प्रणालीलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गरिने छ । उक्त समाचार आजको गोरखापत्रमा दैनिमा छापिएको छ ।
ढुङ्ग्रे गाउँ सडक सञ्जालले जोडियो
नेपालमै कोरोनाविरुद्ध खोप तयार भएको दावी : परीक्षणको माग